"Sanadkii Hore Sadio Mane Ayaa Xaq U Lahaa Ballon d'Or, Ha Iskaga Tago Liverpool Oo Haku Biiro Midkood Real Madrid & Barcelona Si Uu Ugu Guuleysto". - Gool24.Net
“Sanadkii Hore Sadio Mane Ayaa Xaq U Lahaa Ballon d’Or, Ha Iskaga Tago Liverpool Oo Haku Biiro Midkood Real Madrid & Barcelona Si Uu Ugu Guuleysto”.
Mandy Toure oo ah shaqsi saamayn weyn ku leh kubadda cagta dalka Senegal ayaa ka hadlay abaalmarintii Ballon d’Or ee dhawaan la bixiyay iyo waliba sidii uu ugu qalmay hoggaamiyaha dalkiisa iyo kooxda Liverpool ee Sadio Mane.
Mane ayaa xilli ciyaareed cajiib ah kusoo raaxaystay isaga oo Liverpool ka caawiyay inay 97 dhibcood kaga dhammaysato horyaalka kaddibna ay Final-ka UEFA Champions League ugu guuleysato magaalada Madrid.
Mane ayaa markale qaab ciyaareedkaas joogteeyay xilli ciyaareedkan isaga oo ka caawiyay Reds inay dhibco badan ku hayaan horyaalka sidoo kalena ay iska xaadiriyaan wareega 16-ka ee UEFA Champions League.
Bandhigyadiisaas ayaa noqday kuwo kasoo dhalaalay xafladii lagu bixiyay Ballon d’Or bishii hore markaas oo loo aqoonsaday xiddigii afraad ee dunida ugu fiicnaa sanadkii tagay kana dambeeyay Lionel Messi, Virgil Van Dijk iyo Cristiano Ronaldo”.
Haddaba, Mandy Toure oo ururka Genaration Foot ka aas-aasay Senegal sanadkii 2000 si uu u horumariyo hibada qaydhin ee ku duugnayd xiddigaha dalka Senegal ayaa 20 sano kaddib arkay natiijo wanaagsan oo uu Mane keenay.
Toure ayaa aaminsan in Sadio uu u qalmay wax gabi ahaanba intaas ka badan oo ah hanashada Ballon d’Or isaga oo kula taliyay inuu iskaga tago Liverpool oo uu ku biiro Barcelona iyo Madrid midkood halkaas oo uu u arko in Ballon d’Or ay ka dhawdahay.
“Xaqiiqada ah in Sadio uu ku guuleystay Ballon d’Or-ta Africa (Abaalmarinta xiddiga sanadka ee Africa) waxay ku dhiirigelin doontaa inuu sidoo kale ku guuleysto mida Yurub” Ayuu hadalkiisa ku bilaabay Mandy.
“Taasi waa ujeedadiisa, Sadio markasta waxa uu ii sheegi jiray inuu noqon doono mid kamida xiddigaha dunida ugu fiican, Sidaas ayuu igu yidhi imikana isagu waa kamid, Laakiin waa inuu imika ka tago Liverpool”.
“Isaga ayaa lahaa (Ballon d’Or) sanadkii u dambeeyay waana inuu ka tago Liverpool marka ay ka dhammaato si uu u tago Barcelona ama Real Madrid”.